Ndị na-emepụta eriri mmiri na ndị na - ebunye ya - China Hydration eriri afo Factory
2021 New Large emepe Water Bag High Quality
Akpa mmiri 2021 kachasị ọhụrụ na-agbaso teknụzụ kachasị elu na ụdị ọhụụ kachasị ọhụrụ. Ọ bụ ihe adaba na ala iji. Ọ na-ezute ihe nchebe gburugburu ebe obibi chọrọ, ọ naghị egbu egbu ma ọ nweghị isi pụrụ iche, enweghị BPA, ọ bụkwa ọkwa nri. Wetara gị ihe kachasị mma.
Nkebi Nke: BTC071
Aha aha: eriri afo mmiri
Ihe: TPU / EVA / PEVA
Ọkpụrụkpụ Film: 0.3mm
Mbukota: 1pc / poly poly + katọn
N'èzí Sports New Water Bag Camping Hiking agba ọsọ
Akpa mmiri nwere nhazi dị mma, imepụta mkpọchi mkpọchi maka ọkpọ mmiri, nnukwu oghere mmeghe nke ihe ngosi mmịfe, imepụta akara akara, yana imepụta imi mmiri na-atọ ụtọ, ha niile na-ewetara gị mma dị ukwuu jiri. O nwekwara ezigbo mma na ndụ ogologo ndụ.
Nkebi Nke: BTC081
N'èzí Sports 6L ịkwanyere ịsa Bag Portable
Akpa mmiri egwuregwu n'èzí nke na-enye gị ohere ịnụ ụtọ ịsa ahụ n'èzí. Okwesiri maka gburugburu di iche iche, nwee otutu ihe eji eme ya, o gha emebi, ma di mfe iburu. Ọ dịghị mfe imebi ịgba anya mmiri. Jiri anyanwụ mee ka mmiri dị elu, na-enye gị ohere imeghe ụzọ ọhụrụ nke ịsa ahụ n'èzí.
Nọmba ihe: BTC021
Aha aha: Akpa ịsa
nkọwapụta: 28 * 48mm
N'èzí Sport Hydration eriri afo akpa
Egwuregwu mmiri egwuregwu na-enweghị egwuregwu BPA na-enweghị atụ, nke nwere ike ibugharị na gburugburu ebe obibi, nke a bụ ezigbo enyi gị maka ahụike, ugwu, ịgba ịnyịnya, na ịma ụlọikwuu.
Eco-enyi na enyi mmiri akpa na-enweghị BPA, patented nnukwu oghere imewe bụ adaba n'ihi na ị na-eji, ma ị na-arịgo, ugwu, ịgba ígwè ma ọ bụ oké egwuregwu, mmiri a akpa ga-abụ ihe kasị mma nnyemaaka.
Nnukwu mmiri Hydrogen N'ogbe N'uba
A na-eme akpa mmiri hydration nke na-adịghị egbu egbu, na-enweghị isi, nke transperent, nke dị nro na nke nwere gburugburu ebe obibi. Enwere ike itinye ya na oghere ọ bụla nke akpa azụ n'oge na-arị ugwu, ịnya igwe na njem ndị ọzọ. Ọ dị mfe itinye mmiri, dị mma ị toụ, na-a suụ ma na-ebu gị mgbe ị na-a drinkingụ mmanya.